दुवै हातले उषाको योनीमा........... - Nepali Sex Tube
उषा सहर घुम्न निस्कन्छन्। उनीहरू काठमाडौँको ख्यातिप्राप्त क्याम्पसमा अध्ययन गर्दछन्। उनीहरूमध्ये उषा अध्ययनका लागि गाउँबाट काठमाडौँ आएकी हुन्। भनिन्छ, वैंशको बेला स्याल पनि राम्रो देखिन्छ भने राम्रोसँग बैंश सवार भइसकेका ती दुई युवती निशा र उषालाई बाटोमा हिँड्दा नजर नलगाउने पुरुषहरू कमै होलान्। के बूढा, के बच्चा, के युवा हरेकका नजर बाटो क्रस गर्दा ती युवतीहरूको सुन्दर अनुहार अनि शरीरलाई आकर्षक बनाइरहेको वक्षस्थलमा ठोकिन्छ। त्यस दिन ती दुवै सुन्दरी युवतीहरू काठमाडौँको एउटा पार्क घुम्न पुग्छन्। त्यहाँ युवक-युवतीहरू प्रेममा मस्त छन्। कुनै-कुनै बेला त यति उत्तेजक दृश्य पनि देखिन्छ कि उनीहरूको शरीरमा सय भोल्टको करेन्ट सवार भएजस्तो अनुभूति हुन्छ। ‘तँलाई त्यस्तो रहर लाग्दैन?’ चुम्बन गरिरहेका एकजोडी देखाएर निशा भन्छिन्।
‘के-के भन्छे, के-के, चूप लाग्’ उषाले हाँसेजस्तो गरेर उत्तर दिई। ‘तँ र म त एकै आत्माका साथी हौँ। अनि तेरो र मेरो बारेमा एक-अर्कामा निकै थाहा पनि छ। तेरो मनको कुरा मलाई किन लुकाउँछेस्। बरु मलाई भन्, म तेरो हरइच्छा पुर्याइदिन तयार छु’- निशाले धेरै सदाशयता प्रकट गर्दै भनी। ‘धन्य निशा, तँ मेरो आत्मीय साथी होस्, कति प्यारी छस् है – एक दिन तँसँग भेट्न पाइन भने त मलाई कस्तो नरमाइलो लाग्छ’- उषाले आभार प्रकट गरी। यस्तै गफ गर्दै उनीहरू पार्कबाट फर्किए र भोलि फिल्म हेर्न जाने योजना बनाए। भोलिपल्ट निर्धारित समय निशा उषाकहाँ आइपुगी। ‘उषा तयार भइस् ?’- निशा बोल्दै उषाको कोठामा प्रवेश गरी। ‘हुँदैछु, एकछिन् पख न !’- उषाले ड्रेस मिलाउँदै भनी। छ्या, के कुर्ता-सुरुवाल लगाएकी, फुकाल् त्यो, पेन्ट र टिसर्ट लगा।’ निशाको बोलीले तुरुन्तै प्रभाव परेझैँ उषाले ड्रेस चेञ्ज गरी। टि-सर्ट र पाइन्टमा ऊ निकै आकर्षक देखिई। टाइट टिसर्ट र पाइन्टले उसका अङ्गहरू पुष्ट देखिए।
निशाले कार ड्राइभरलाई गाडी स्र्टार्ट गर्न भनी। उनीहरू काठमाडौँको गुण चलचित्र घर -ग्वार्को) मा पुगे। ड्राइभर गाडी लिएर फर्कियो। टिकट लिएर उनीहरू सिनेमा हलभित्र प्रवेश गर्ने
तरखर गर्दै थिए, त्यहीबेला निशाले एकजना आफ्नो पुरानो साथीलाई देखिन्। ‘विजय !’ निशाले हल्का स्वरले त्यो पुरुषलाई बोलाई। विजय पछाडि फर्कन्छ, ‘ओ ! निशा, के छ तिम्रो खबर – आजकाल त कतै देखिँदैनौ। कहाँ गायब भयौ ?’- विजय निशाको नजिक आएर भन्यो। ‘ठीकै छ नि विजय, कहाँ जानु र, बरु तिमी पो मुखै देखाउन छाड्यौ। के हो इञ्जिनियर भइयो भनेको सुनेकी थिएँ। कतै त्यही भएर हामीलाई वास्तै नगरेको हो कि क्या हो ?’- निशाले व्यंग्य गर्दै भनी। ‘वाफ रे मलाई त्यस्तो सोचेको – म मेरा पुराना साथीहरूलाई कदाचित बिर्सन्न क्या ! अँ बरु इञ्जिनियर हुनचाहिँ अझ एक वर्षपर्खनुपर्ने भएको छ। इञ्जिनिर हुँदैमा साथीहरूलाई बिर्सनेचाहिँ होइन नि !’- विजयले स्पष्टीकरण दियो।
‘ल ठीकै छ। बरु परिचय गरौँ न विजय, ऊ मेरो कलेजकी अत्यन्त मिल्ने साथी उषा, अनि उषा ऊचाहिँ मेरो स्कूल पढ्दाको साथी विजय, भविष्यको इञ्जिनियर।’ निशाले दुवैको एक-अर्कामा परिचय गराई। दुवैले हात मिलाए। ‘ल कुरा गर्दै गरौँला अहिलेचाहिँ सिनेमा हेर्न जाऔँ’- निशाले भनिन्। सबैजना हलभित्र पस्छन्। विजय मनमा सोच्दै हुन्छ- ‘क्या राम्री केटी रै’छ बा, कहाँ बस्छे होला यो केटी, अनि कहाँ होला घर – फ्रेण्डसीप बढाउन पाए राम्रै हुन्थ्यो !’ सिनेमा सुरु हुन्छ। कुरा गर्दै खानेकुराहरू खाँदै सिनेमा समाप्त पनि हुन्छ। रोमाञ्चक त्यो सिनेमाले उनीहरू मनोरञ्जन लिँदै थिए। सिनेमा समाप्त भएपछि सबै बाहिर निस्किए। ‘ल त विजय, आज अकस्मात् भेट भएर सँगै सिनेमा पनि हेरियो, फोन गर्दै गर्नु, हामी अहिले जान्छौँ’- निशाले विजयसँग बिदा मागिन्। ‘कहाँ जाने ? केही सवारी छ ?’- विजय प्रश्न गर्छ। ‘बागबजारतिर जाने। सवारी देखेनौ त यत्रा ट्याक्सीहरू छन्’- निशाले हाँस्दै जिस्कने मुडमा भनिन्। ‘ठीकै छ, मेरो कार छ। म पनि बागबजार नै जाने हो। जाऔँ न त मसँगै’- अनुरोधपूर्ण भाषामा विजयले भन्यो।
‘जाऔँ न त, मेरो गाडी अहिले आउँदैन, ट्याक्सीमा जानुभन्दा विजयकै गाडीमा जाऊँ है !’- उषातिर हेर्दै निशाले भनिन्। उषा सहमत भई। दुवैजना विजयको गाडीमा बस्छन्। गाडी गुड्न थाल्छ। अध्ययनमा अत्यन्त लगनशील भएर पढ्ने विजय धनी बाबुको छोरा भए पनि निकै सरल छ। ऊ बाहिरी संसारसँग निकै अनभिज्ञ छ। ‘अघि त केही कुरै गर्न पाइएन, अनि भन निशा के छ तिम्रो खबर ?’ ‘ठीकै छ, बाँचिएकै छ। तिम्रो झैँ इञ्जिनियरिङ पढ्न नपाए पनि आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिइरहेकी छु’- निशाले विजयको प्रश्नको उत्तर दिइन्। विजय अब कुरामा एक कदम अगाडि बढ्न चाहन्छ- ‘हामीले गफ त खुबै गर्यौँ तर तिम्रो साथी त बोल्नु नै हुन्न नि, निशा ?’ ‘हैन, तपाईंहरू कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। बिनाप्रसङ्ग कुरा गर्दा हाँस्यको पात्र भइन्छ भनेर मात्रै नबोलेकी’- उषाले स्पष्ट पारी। ‘प्रसङ्ग त जति पनि छ नि, बरु तपाईंलाई प्रसङ्ग निकाल्न गाह्रो भयो भने मै निकाल्छु। ल भन्नुस्, तपाईं कहाँ बस्नुहुन्छ ?’- विजयले बडो स्फूर्तिसाथ आफ्नो मनको भाव प्रकट गर्यो। उषाले आफ्नो कलेजको नाम बताइन्, अनि त्यहीँ होस्टल बस्ने कुरा पनि बताइन्। ‘अनि तपाईंको घरचाहिँ कहाँ पर्छ नि ?’ विजय उषाको बारेमा अझ बढी जानकारी लिन चाहन्छ। ‘मेरो घरचाहिँ तराईमा पर्छ। रौतहटतिर हो’- उषाले आफ्नो घरको ठीक स्थान नबताए पनि नजिकको ठाउँ भनी। यसैबीच उनीहरू फोन नम्बर साटासाट गर्छन्। उषाले होटलको रिक्वेस्ट फोन बताइदिई। उषाले पनि विजयको बारेमा सोधी। विजयले गाडी रोक्छ, दुवै जना पुतलीसडक ओर्लन्छन्- ‘ल त विजय बाई सी यु अगेन, ओ के !’- निशा बोल्छिन्। ‘सेम टू बोथ !’ विजयले उत्तर दिन्छ।
उषा र निशा हिँड्दै उषाको कोठातिर लाग्छन्। विजय उषाको सुन्दरता, उसको सुन्दर अनुहार, पुष्ट वक्ष, अग्लो कद, भद्र व्यवहार सम्झँदै त्यो रातभरि उसले उषाका बारेमा सोचिरह्यो। बिहान कलेजबाट फर्केपछि खाना खाइसकेर आफ्नो कोठामा विश्राम लिइरहेको बेला उषालाई उनको टेलिफोन आएको जानकारी होस्टलको टेलिफोन किपरले बताएपछि उषा टेलिफोन उठाउन जान्छिन्। रिसिभर उठाउँदै- ‘हेल्लो, को बोल्नुभएको होला -‘ उताबाट पुरुष आवाज आउँछ- ‘हेल्लो, चिन्नुभएन ?’ ‘चिन्न सकिन त, को हो तपाईं ?’- अनभिज्ञता प्रकट गर्दै उषाले भनिन्। ‘तपाईं चाँडै बिर्सनुहुन्छ कि के हो ? यति निष्ठुरी हुन त भएन नि, यस्तो सम्झेर हामीलाई पनि फोन गरे हुन्छ नि !’- पुरुष आवाज आयो। ‘तपाईं को हो मैले चिन्न सकिन। त्यसैले केही भन्नु छ भने प्लीज भनिहाल्नुस्, नत्र मैले फोन राखेँ फाल्तु गफ गर्न मसँग समय छैन’- उषाले अलि कडा स्वरमा आफ्नो अभिव्यक्ति प्रकट गर्छिन्। ‘सरी, मैले यहाँलाई फोन गरेर डिस्टर्ब गरेँ भने फेरि पनि सरी चाहन्छु। उषाजी, यहाँले स्वर चिन्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर मात्र लामो कुरा गरेको हुँ, म विजय हुँ’- विजयले नाम बतायो। ‘ओ माई गड ! आइएम सरी, विजयजी !
म त तपाईं हो भन्ने एक मनले पनि सोचेकी थिइन’- उषाले आर्श्चर्य प्रकट गर्दै जवाफ फर्काई। उनीहरूले सामान्य हालखबर सोध्नेबाट कुरा सुरु गरे। केही समयको मीठो कुराकानीपछि विजयले भोलिको लागि समय माग्यो। उषाले भोलि विजयलाई फोन गर्ने वाचाका साथ फोन राखी। उषाले त्यति धनीको छोरा विजयले उसलाई फोन गर्ला भन्ने सोचेकी पनि थिइन। उता विजय भने उषासँग भेट भएदेखि नै बेचैन बनेको थियो। उषालाई उसले भित्रभित्रै मन पराउन थालिसकेको थियो। तर एक्कासि त्यस्तै कुरा प्रकट गर्दा राम्रो हुँदैन भन्ने ठानेर चुप रहेको थियो। ऊ उषालाई सम्झन्छ अनि त्यति सुन्दर युवतीलाई श्रीमती बनाउँदा फरक नपर्ने सम्झेर ऊसँग प्रेम गर्ने कल्पन गर्न थाल्छ। विजयसँगको कुराकानीपछि उषा पनि धेरै खुसी हुन्छिन्। उनी एक्लै हाँस्छिन्। ऐनामा हेर्छिन्, अनि फेरि विजयलाई सम्झन्छिन्। विजयसँग प्रेम गर्दै हिँडेको अनि विजयलाई पति बनाएको सम्झन्छिन्। छ्या मैले के सोचेकी – आफैँसँग प्रश्न गर्छिन्। दुवै जना एक-अर्काप्रति बेचैन बन्छन्। भोलि निर्धारित समयमा उषाले फोन गरी। विजय उषाको फोन पाएर खुसी हुन्छ। उनीहरू फोनमा अलिक नजिक भएझैँ जिस्किएर कुरा गर्छन्। अनि पुनः फोन गर्ने वाचाका साथ फोन राख्छन्। उनीहरू बारम्बार फोनमा कुराकानी गर्छन्। जसले गर्दा आत्मीय वातावरण सिर्जना हुन्छ। उनीहरूले प्रत्यक्ष भेट्ने वाचा गरे।
उषाले निशालाई एकदिन भेटमा भनिन्- ‘निशा मलाई विजयले अति नै फोन गर्छ, अनि भोलि भेट्न पनि भनेको छ।’ निशा उषाको चिउँडो समाउँदै बोल्छिन्- ‘ठीकै छ भेट् न त, के भयो र – विजय ह्याण्डसम पनि छ, भद्र पनि छ। भेट है उषा अब तेरै त दिन आए नि, गरिखा। मैले तँलाई कृत्रिम वस्तु चिनाएकी थिएँ, अब वास्तविक भेटिस्। विजय त्यस्तो खाइलाग्दो छ, उसको चीज पनि त विशाल नै होला ! मोरीले खुब मोज गर्ने भई, बधाई छ !’ ‘छ्या, बढ्दा नबोल् है मोरी’ लाडे पाराले उषाले भनिन्। निशाले भनेका कुराहरू उषाको कानमा ठोक्किइरहन्छन्। उनलाई कतिबेला विजयलाई भेटौँ भइरहेको थियो। निर्धारित समय र स्थानमा दुवैको भेट भयो। ती एकजोडीलाई त्यो भेटले प्रेममा बाँध्छ। प्रथम भेटमा अत्यधिक भद्रताका साथ विजयले कुरा गर्छ। काठमाडौँको मुटुमा रहेको एउटा पार्कमा उनीहरू दिन बिताउँछन्। खासै गरिने कुरा पनि हुँदैन। अनि छुट्टनि पनि मन लाग्दैन उनीहरूलाई। तैपनि, साँझ परेपछि उनीहरू छुट्टिन्छन्।
उनीहरू दैनिकजसो भेट गर्न थाले। विजय, उषाका खातिर जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि पछि नपर्ने स्थितिमा पुग्यो। उषाले पनि विजयलाई जीवनसाथी मानिसकेकी हुन्छिन्। ती दुईका बीच आत्मीय प्रेमले प्रधानता पाएको हुन्छ। एकदिन निशाले उषालाई सोधिन्- ‘ए उषा, तँलाई मैले कृत्रिम प्रविधि ल्याएर राम्ररी सिकाइसकेकी छु, विजयको वास्तविकतासँग खेल्दा झन् पारङ्गत भइसकिस् होला नि, कत्रो रैछ त्यसको माल – मज्जा त खुब दिन्छ होला नि !’ छि, त्यस्तो हैन क्या, हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो कार्य गरेका छैनौँ’- उषाले उत्तर दिइन्। ‘उसो भए अब तँ बुझ् कि विजय तेरो हुनै सक्दैन, ऊ तँबाट उम्क्यो। हरपुरुषले आफ्नी प्रेयसीबाट सधैँ त्यही कुरा चाहिरहेको हुन्छ, जुन तैले अहिलेसम्म पनि दिएकी रहिनछस्। यदि तँ विजयजस्तो धनाढ्यको सम्पत्तिमा आजीवन राज गर्न चाहन्छेस्, अनि इञ्जिनियरकी पत्नी बन्न चाहन्छेस् भने यो तेरी सानीकान्छी विजयलाई सुम्पिदे’- निशाले छिल्लिँदै भनिन्। फेरि निशा
बोलिन्- ‘विजयले कहिलेकाहीँ तँलाई कतै टाढा घुम्न जाने प्रस्ताव राखेको छ कि छैन – कुनै पुरुषले त्यस्तो प्रस्ताव राखेमा नजानिँदो पाराले उसको उद्देश्य त्यही हो भन्ने बुझ्नर्ुपर्छ।
थाहा पाइस् होला नि !’
निशा गइसकेपछि उषा निशाले भनेका कुरा सम्झिरहन्छिन्। र, एक पटक विजयले उसलाई नगरकोट घुम्न जान राखेको प्रस्ताव पनि सम्झिन्छिन्। ‘के उसो भए विजय मेरो हुन सक्दैन – के म उसको सङ्गिनी बन्न सक्दिन – होइन, नाइँ म उसकै हुन्छु। म उसलाई खुसी पार्छु’ उषा एकान्तमा आफैँसँग प्रश्न गर्छिन् र उत्तर पनि दिन्छिन्। उषा फोन डायल गर्छिन्- ‘हेल्लो, उताबाट पुरुषको आवाज आउँछ। उषा पुनः बोल्छिन्- को विजय हो -‘ ‘उषा हो, मलाई नचिनेको कि के हो उषा -‘ विजय बोल्छ। ‘चिनिहालेँ नि, बरु तपाईं भन्नुस् न कसरी मलाई चिन्नुभो -‘ उषाले सोधिन्। ‘चिन्दिन कि के हो त – आफ्नी मायालाई नचिन्ने कुरा पनि आउँछ – तिमी जहाँ भए पनि तिम्रो आवाज सुन्नेबित्तिकै तिमीलाई चिनिहाल्छु नि’- विजयले प्यार प्रकट गर्यो। ‘बुझेँ बाबा, बुझेँ, हजुरले मलाई चिन्नुहुन्छ। अनि तपाईंको खबर के छ – हिजोआज त सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ नि -‘अलि व्यस्त थिएँ त्यसैले, फुर्सद भए दर्शन पाउँ कि -‘ विजयले आफ्नो कुरा बताउँछ। के खोज्छस् कानो आँखा भनेझैँ उषाले पनि त्यही चाहेकी थिइन्। भनिन्- ‘हजुरको जो आज्ञा! दुई बजे त्यही कलेजअगाडि आउनु न है !’ ‘हुन्छ, दुई बजे म आउँछु, अहिले राखौँ’- विजयले समर्थन जनायो। ठीक दुई बजे दुवैको भेट हुन्छ। उनीहरू एक प्रसिद्ध रेष्टुरेन्टमा गएर खाँदै, गफ गर्दै दिन बिताए। उनीहरूबीच आज चुम्बनको आदान-प्रदान पनि खुबै हुन्छ।
साँझमा विजयले उषालाई दुई दिनपछि पोखरा घुम्न जाने प्रस्ताव राख्छ। उषा अब विजयका हरेक प्रस्ताव स्वीकार गर्ने पक्षमा हुन्छिन्। उनले विजयको प्रस्ताव सहर्षस्वीकारिन्। पोखरा जाने दिन आउँछ। मानिस र घरहरूको अत्यधिक चापले भासिएझैँ देखिने त्यो काठमाडौँ सहर छाडेर हरियाली पर्यटकीय स्थल पोखरा पुग्छन्। दिनभरि पोखराका विभिन्न पर्यटकीय स्थल घुमी साँझपख एउटा महङ्गो होटलमा रात बिताउन पुग्छन् उनीहरू। मिष्टर एन्ड मिसेज विजय भनेर होटल खातामा नाम लेखाई उनीहरू रुमतिर लाग्छन्। मिसेज विजय लेख्दा उषालाई एउटा अलग अनुभव हुन्छ। ऊ मनमनै खुसी हुन्छे। साँझको खाना लिइसकेपछि दुवै कोठामा पुग्छन्। दुवैले एकले अर्कालाई नियाल्छन्। के गर्ने, के नगर्ने, असमाञ्जस्यमा पर्छन्। परिस्थिति विचार गरी विजयले बत्ती अफ गर्छ। उषालाई अङ्गालोमा लिन्छ र ओठमा चुम्बन गर्दै सुस्तरी बोल्छ- ‘सुत न थकाई लागेको छैन -‘ विजयले भन्दा उषा मौन हुन्छिन्। विजय आफ्ना लुगा फुकाली नाइट ड्रेस लगाउँछ। उषा बसिरहेकी हुन्छिन्। विजयले विस्तारै उषालाई बिछ्यौनामा पल्टाउँछ। दिउँसोकै ड्रेसमा उषा ओछ्यानमा सुत्छिन्। विजय उषाको नजिकै आएर पल्टन्छ। केही क्षण दुवै
मौनरूपमा सुतिरहेका हुन्छन्।
बोल न उषा, के भयो – किन चुप लागेकी -‘- विजय बोल्छ। ‘के कुरा गर्ने भन्नु न, तपाईं नै मेरो छेउमा हुनुहुन्छ, तपाईं भएपछि मलाई सबै पुगिसरी हुन्छ’- उषाले भोनिन्। ‘तिमी कति प्यारी छौ है, मलाई कति माया गर्र्छौ तिमी -‘- ओठमा चुम्बन गरी आफ्नो हातले उषालाई सुस्तरी अङ्गाल्दै विजयले भन्यो। ‘तपाईं पनि त मलाई माया गर्नुहुन्छ नि। मलाई तपाईं जति प्यारो यो दुनियाँमा कोही लाग्दैन’- उषाले पनि विजयको चुम्बनको प्रत्युत्तर फर्काइन्। अब विजय उषाको अझ नजिक टाँसिएर सुत्छ। आफ्नो हात उषाको वक्षमा लगेर स्थिर गर्छ। विस्तारै त्यहाँ चल्मलाउन थाल्छ। ऊ अब उषाको मुखभित्र आफ्नो मुखले के-के खोज्न थाल्छ। उषाको शरीरको न्यानो स्पर्शले विजयलाई उत्तेजित बनाउँदै लग्यो। दिउँसो लगाएको लुगामा सुतेकी उषाको टिसर्ट विस्तारै विजयले माथितिर सार्न थाल्छ। टिसर्ट माथि सारिसकेपछि ऊ आफ्नो हात ब्राको हुकमा लगेर चलमलाउन थाल्छ। उषा ठूलो श्वास फेर्दै हुन्छे। ब्राको हुक खोल्न अप्ठ्यारो भएपछि उषाले विजयलाई सघाउँछिन्। विजय आफ्नो कार्यमा सफल हुन्छ। अब ऊ आफ्ना हातहरू उषाको पुष्ट वक्षमा ल्याएर स्थिर गर्छ। एउटा सानो बच्चाले गुडियासँग खेलेझैँ विजय उषाका स्तनसँग खेल्न थाल्छ। उत्तेजनाले बेला-बेला उषा विजयको ओठ चुस्छिन्।
त्यस्तै विजय पनि उसको ओठ चुस्न थाल्छ। विजय हातको औँलाले उषाको नाइटोको गहिराइ नाप्छ। जुन उषाको पेन्टको टाँकमा चल्मलाउँछ। तुरुन्तै आफ्नो इच्छामा सफलता पाएपछि उषाको पेन्ट तल सार्न थाल्छ। सो कार्य गर्दा विजयलाई उषाले सहयोग गर्छिन्। उषा पेन्ट फालेर विजयसँग लपक्क टाँसिन्छिन्। विजयले आफ्नो चोर औँला उषाको योनीमा पसाउँछ। यसबेला विजयको हातले उषाको योनीबाट तरल पदार्थ निस्किरहेको अनुभूति गर्छ। ऊ उषाको योनी खेलाउँछ। कुनै परस्त्रीको प्रथम पटक सामीप्यता पाएको विजय उषाको हरेक अङ्गहरूलाई चाख लिई लिई निरीक्षण गरिरहन्छ। उषा बेला- बेलामा उत्तेजनाले विजयको ओठ टोक्दै हुन्छिन्। यसबेला विजयको काम नायक चाखका साथ उषाको महत्वपूर्ण अति गोप्य त्यही अङ्गसँग जोडिएको हुन्छ। उषा पनि उत्तेजित हुन्छिन्। केही बेर नबोलीकन विजयले काम सुरु गर्ला भनेर आशा गर्छिन्।
तर विजयचाहिँ हातले खेल्नमै व्यस्त भएपछि उनी बोल्छिन्- ‘के गरिराख्नुभएको राजा, छिटो न आफ्नो काम गर्नुस्, कति मलाई तड्पाइरहनुहुन्छ -‘ ‘मेरी प्यारी रानी, म तिमी तड्पेको सुन्न सक्दिन, त्यसैले अब आफ्नो काम सुरु गर्छु विजयले कुरा स्वीकार्छ। उषाको हात समातेर आफ्नो लिङ्गमा ल्याउँछ। आगोबाट हात झिकेझैँ गरी उषा फुत्त हात झिक्छे। विजय उषामाथि उक्लन्छ। उषा विजयलाई सजिलो पारिदिन्छे। विजयले फटाफट आफ्नो काम सुरु गर्छ। लिङ्ग प्रवेश हुनासाथ विजयलाई खूब आनन्द आउँछ। उषा भने पीडाले चिच्याउन थाल्छिन्- नाइँ-नाइँ, मैले सकिन छिटो बाहिर निकाल्नुस्…। विजयललाई उषाको पीडा सैह्य हुँदैन, त्यसैले विजयले आफ्नो कामनायक बाहिर निकाल्छ। ‘के भयो तिमीलाई – किन डराएकी, भन त -‘ विजयले उषाको गाला मुसार्दै सोध्यो। ‘तपाईंलाई त मज्जा भयो होला नि, अर्कालाई के भइराखेको छ, ख्याल गर्नु छैन -‘ लाडे बोली बनाएर उषाले भनी। ‘भन न त मैले के गर्नुपर्छ – म तिमीलाई पीडा भएको सहन सक्दिन क्या !’ विजय बोल्छ। ‘कस्तो साह्रो गरी कुहिनाले थिचेको – यत्रो ठूलो शरीर थामेकी छु। त्यहीमाथि कुहिनाले थिच्दा अर्कालाई दुख्दैन -‘- उषाले
विजयलाई वास्तविकता बताउँछिन्। विजय त्यो गल्ती दोहोर्याउँदैन।
बडो सतर्कका साथ पहिले झैँ गरी विजयले आफ्नो काम सुरु गर्छ। आफ्नो नायकलाई लक्ष्यमा पुर्याइसकेपछि विजय तल-माथि गर्दै मच्चिन थाल्छ। हातले उनको सुकोमल स्तन मुसारिरहेको हुन्छ। त्यस्तै चुम्बन पनि गरिरहेको हुन्छ। दुवै आनन्दले सुत्छन् र निदाउँछन्। राति जब उषा ब्युँझिन्छिन्, उनलाई थाहा हुन्छ आफ्नो योनीक्षेत्रमा केही सल्बलाइरहेको छ, जसको उनलाई हल्का आनन्द पनि आइरहेको छ। उनी हात लम्काएर बेड स्वीच अन गर्छिन्। उज्यालोमा देख्छिन् त विजय उनका दुवै तिघ्रा फारेर बीचमा बसेर उनको गुप्तक्षेत्रमा जीब्रो पो चलाइरहेको ! बत्ती बलेपछि विजय उषालाई हेरेर थोरै हाँस्छ। उषा पनि मुस्कुराउँछे। विजय पुनः आफ्नो कार्य सुरु गर्छ। ऊ योनीको डिलमा आफ्नो जिब्रो चलाउँछ। उषाको बच्चाको जस्तो कलिलो योनीमा जिब्रो चलाउन उसलाई खूब मजा आउँछ। उषा पनि आनन्दले विजयको टाउको सुम्सुम्याउँछिन्। केही समयपश्चात् विजय उषाका स्तन प्रेमपूर्वक मुसार्दै आफ्नो जिब्रो लिङ्गझैँ योनीमा भित्र-बाहिर गराउँछ।
उषा भुतुक्कै भएर सुस्केरा काड्छिन्। उनी भन्छिन्- ‘विजय, लौन, मलाई त खपिनसक्नु भयो, अब केही गर्नुस्।’ उषाले यसो भन्नासाथ विजय फेरि उषामाथि चढ्छ। उसले यसो गर्दा उषाको आँखाअगाडि विजयको विशाल लिङ्ग देखापर्छ भने विजयचाहिँ उषाको योनीतिर आँखा पुर्याउँछ। उषा विजयको लिङ्ग हातमा लिन्छिन् र प्रेमपूर्वक मुसार्दै चुस्न थाल्छिन्। उता, विजय दुवै हातले उषाको योनीमा चलाउन थाल्छ। यो क्रियाले दुवैलाई चरम आनन्द प्राप्त हुन्छ। केही समयपछि दुवै स्खलनको अवस्थामा पुग्छन्। विजय बोल्छ- ‘उषा केही छिन रोक त।’ ‘किन राजा -‘ विजयको विशाल लिङ्ग मुखबाट निकाल्नै उषा बोल्छिन्। ‘म बग्न लागेँ, त्यसैले के।’ विजयले जवाफ दिन्छ। ‘मलाई पनि त्यस्तै भइरहेछ। यही मौकामा काम सिध्याउ न हुँदैन -‘ विजय- ‘यति छिट्टै किन -‘ उषा- ‘जागेपछि फेरि गर्ने नि, के आपत छ र ! हामी दुई छँदै छौँ क्यारे।’ ‘त्यसो भए गरेर नै सिध्याउने त -‘ यसो भन्दै विजय फर्किन्छ र उषाको योनीमार्गमा आफ्नो विशाल लिङ्ग लगेर राख्छ। विस्तारै दबाब दिन्छ।
लिङ्ग योनीमा पस्छ। उषाका स्तन सुम्सुम्याउँछ। विस्तारै प्रहार गर्न थाल्छ। यसरी लयात्मक तरिकाले प्रहार गरेको उषालाई खुब रमाइलो लाग्छ। विजय जोडले प्रहार गर्न थाल्छ। उषा उसलाई उत्साहित गर्दै बोल्छिन्- ‘हो, अझ जोडले प्रहार गर्नु, हो-हो, यसरी नै।’ उषा यसो भन्दै विजयलाई हौस्याउँछिन्। दुवै उत्तेजनाले कराउँछन्। र, केही थप घात- प्रतिघातपछि दुवै शिथिल हुन्छन्। त्यसपछि यी दुई प्रेमी जोडी आनन्दपूर्वक टाँसिएर सुत्छन् र निदाउँछन्।
कस्सिएको १८ बर्से पुतिलाई बेस्करी बजाउन थाले